Inbound Marketing Expert - Ndepụta nke Top Inbound Pros
Ndị Inbound Marketing Experts Will Ga-amụta Site Online
Monday, May 14, 2012 Fraịde, Septemba 26, 2014 Douglas Karr
Onye ọrụ Dave Morse nke Delta foset gafere m ekele m taa maka ime ndepụta nke 18 Ga-Mara Inbound Marketing ọkachamara na Marketo's Whitepaper: Mee ka Mmetụta Gị Dịkwuo Elu: Otu esi eme ka Mmetụta nke Mmemme Azụmaahịa Gị bawanye ụba.
Kedu ọkachamara Ọkachamara Inbound?
Nbanye ahịa na-ezo aka na ahịa omume nke na-akpọbata ndị ọbịa, kama ndị na-ere ahịa ga-apụ iji nweta nlebara anya nke ọma. Inbound marketing na-enweta nlebara anya nke ndị ahịa, na-eme ka ụlọ ọrụ ahụ dị mfe ịchọta ma na-adọta ndị ahịa na weebụsaịtị site na ịmịpụta ọdịnaya na-atọ ụtọ. Wikipedia
Kedu ihe m kwesịrị ịchọ mgbe m na-ego ọkachamara n’ahịa Ahịa Inbound?
Mgbe anyị na ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ inbound ahịa gị n'ụlọnga, ụzọ anyị si eme ihe dị iche karịa ọtụtụ ụlọ ọrụ. Anyị na-ewepụta mmefu ego na ndị ahịa anyị ma na-arụ ọrụ n'ofe ndị na-abata abata na usoro iji mejuputa ngwaọrụ na usoro nke na-eto ngwa ngwa dị mkpa iji mee ka ọnụọgụ nke inbound na-eduga.
Ọ bụ uche m na onye ahịa gị na-abata ahịa kwesịrị ịbụ onye na-ere ahịa amaghị ihe (otu ikpo okwu anaghị adabara ihe niile), kwesịrị inwe nka gafee ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọdịnaya, email, akpaaka na nchịkọta, na ha kwesiri ighota nke oma uzo uzo uzo ahia ahia esi abanye. Otu ọwa agaghị arụpụta nsonaazụ ziri ezi.
Chei - nke ahụ bụ nsọpụrụ… ọkachasị inwe aha m n'akụkụ ndepụta ndị ahịa ahịa a nwere ịtụnanya:
Michael Brito - Soro @Britopian
Paul Gillin - Soro @pgillin
Adam Metz - Soro @theMetz
Ann Handley - Soro @MarketingProfs
CC Chapman - Soro @cc_chapman
Chris brogan - Soro @ChrisBrogan
Eze Cindy - Soro @CindyKing
Michael Stelzner - Soro @Mike_Stelzner
Guy kawasaki - Soro @GuyKawasaki.
Jeff Bullas - Soro @JeffBullas
Mari Smith - Soro @MariSmith
Neal Schaffer - Soro @NealSchaffer
Pam Moore - Soro @PamMktgNut
Frank Reed - Soro @FrankReed
Maya Grinberg - Soro @Papayamaya
Kipp Bodnar - Soro @kippbodnar
Dan zarrella - Soro @DanZarrella
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ibudata akwụkwọ akụkọ ahụ, lee nkọwa sitere na peeji ọdịda Marketo:
Ndị ụlọ ọrụ na-achọ iji ụzọ niile nke iru na njikọta na ndị na-achọ ịzụ ahịa ga-agafe ahịa ahịa. Akwụkwọ ọcha a na-eleba anya n'otú esi tinye ahịa inbound n'ime nnukwu usoro ịzụ ahịa nke na-eme ka mmetụta nke ọrụ inbound dịkwuo elu.
The inbound ahịa akwụkwọ ọcha ekpuchi:
Inbound Marketing 101 - usoro na usoro iji bido
Mụba ọhụhụ na iru na SEO na-elekọta mmadụ
Otu esi ezere nkịtị inbound ahịa emehie
Ndepụta maka na-amụba inbound na ịchọpụta ohere nkwado ndị ọzọ
Ezigbo ngwakọta ahịa gụnyere ọpụpụ na ịzụ ahịa akpaaka
Ndi ndi ahia ahia ndi ozo ndi ị gha akwadoro? Biko kwuo okwu!
Tags: Adam MetzAnn HandleyCC ChapmanChris broganEze CindyDan zarrellaFrank ReedGuy kawasakiinbound marketinginbound ahịa ọkachamaraJeff BullasKipp BodnarMari SmithMaya GrinbergMichael BritoMichael StelznerNeal SchafferPam MoorePaul Gillin
Etu ị ga - esi mee Email Email gị Mobile Enyi na Enyi
Anya: Heatmapping na ofufe
Mee 15, 2012 na 9: 42 AM
Ikwesiri ya nwoke! Ekele
Mee 15, 2012 na 2: 25 PM
Ọ kwesịrị Doug!
Ọkachamara Ọkachamara Inbound
Mee 29, 2012 na 1: 41 AM
Nkà ndị ọkachamara dị ka ndị ọkachamara n'ahịa ahịa